selloffers-Dongguan Velve Thread Manufactory
﻿အခမဲ့ join| ဆိုင်းအင်လုပ်ခြင်း | My Weboffice
အဆိုပါ APP ကို ​​Get
Dongguan Velve Thread Manufactory
Core Spun Thread
ဆက်သွယ်ရန်ပုဂ္ဂိုလ်: Cecilia Zhou
ပစ်မှတ် Market က: ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်
မြင့်မားသောဇွဲ 100% polyester ကြိုးတစ်ယူနီဖောင်းဆောက်လုပ်ရေးရှိပြီးနေရောင်ခြည်နှင့်ဓာတုပျက်စီးခြင်းမှခံနိုင်ရည်သော lubricated စူပါမြင့်မားသောဇွဲ 100% ဝိုင်ယာကြိုး polyester ကြိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအနိမ့်ကျယ်ပြန့်ရှိပြီးရေပွက်ပွက်ဆူနေသော 2% ~ 3% shrinkage ။ မြင့်မားသောဇွဲ 100% polyester ကြိုးက high-speed နဲ့ဝေဖန်အပ်ချုပ်စစ်ဆင်ရေးအတွက်အားကိုးအပ်ချုပ်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူ၎င်း၏အမျိုးအစားတစ်ခုခြွင်းချက်ကြိုးဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်ဖိနပ်, အိတ်, သားရေကုန်ပစ္စည်းများနှင့်အဝတ်အမျိုးမျိုးအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
post ကိုအချိန်: 2012-05-17သက်တမ်းကုန်ဆုံးအချိန်: 2013-08-25
ပတ်ချာလည် polyester ကြိုးရောင်းချ
100% polyester ကြိုးတစ် lubricated ပတ်ချာလည် polyester ကြိုးဖြစ်ပါသည်ရက်ကြ၏။ ဒါဟာမြင့်မားသောခွန်အားကိုမြင့်မားတဲ့အပူချိန်ခုခံမရှိပုံပျက်များနှင့်လည်းညှိုးနွမ်းဘယ်တော့မှရှိပါတယ်။ အတော်များများဖောက်သည်အဝတ်နှင့်သားရေဖိနပ်ထဲမှာကိုအသုံးပြုပါ။
core ပတ်ချာလည်ကြိုးအဓိကအမျှင်များကဝိုင်းရံထားတဲ့အတွင်း core ကိုကြိုးပါဝင်သည်ဟုတစ်ဦးကြိုးဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးက corespun ကြိုးခွန်အားနှင့် / သို့မဟုတ်အဓိကချည်၏ elongated နှင့်မျက်နှာပြင်ကိုဖွဲ့စည်းထားသည့်အဓိကအမျှင်များ၏ဝိသေသလက္ခဏာများပေါင်းစပ်။
post ကိုအချိန်: 2012-05-17သက်တမ်းကုန်ဆုံးအချိန်: 2013-08-29
ရေစိုခံအပ်ချုပ်ချည်အထူးရေစိုခံအေးဂျင့်နှင့်အတူသာမန် polyester နှင့်နိုင်လွန်အပ်ချုပ်ချည်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ရေ၌ပစ်ချတဲ့အခါမှာကရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာထိနျးသိမျးထားနိုငျနှင့် sink.It ရဲ့အများအားဖြင့်ရေစိုခံဖိနပ်များတွင်အသုံးပြုမထားဘူး။
post ကိုအချိန်: 2012-05-17သက်တမ်းကုန်ဆုံးအချိန်: 2012-06-10
နိုင်လွန် monofilament နှင့် polyester ပွင့်လင်းချည်ရှိပါတယ်။ နှစ်ဦးစလုံးဓာတုခုခံနိမ့်ကျုံ့ခြင်း, မြင့်မားသောပွန်းပဲ့ခုခံနှင့်အတူခိုင်မာသောဖြစ်ကြသည်။ ပွင့်လင်းချည်ကျယ်ပြန့်အပ်ချုပ်သားရေ, အမှု, ကုန်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဝတ်စုံကိုဘောင်းဘီနှင့်ဖဲကြိုး, ခါးပတ်, webbing ထုတ်ကုန်များအတွက်အသုံးပြုသည်။ အချင်း 0,08 ကနေအချင်း 0.3 မှ spec ရရှိနိုင်ပါသည်။
post ကိုအချိန်: 2020-07-11သက်တမ်းကုန်ဆုံးအချိန်: 2022-07-11
ကအပူအခါကုန်ကြမ်းအဖြစ်စူပါအရည်အသွေးကိုဝိုင်ယာကြိုးကြိုးကိုသုံးပြီးပူအရည်ပျော်ချည်ထည်နှင့်စက္ကူအကြား linear လင့်များစေသည်။ ဒါဟာချောမွေ့စွာအတွင်းခံအဝတ်အစား & အတွင်းခံထုတ်လုပ်သူများနှင့်စာအုပ်-binding နှင့်အတူ polular ပါပဲ။
post ကိုအချိန်: 2020-07-11သက်တမ်းကုန်ဆုံးအချိန်: 2020-07-14
မှောင်မိုက်ချည်ထဲမှာတောက်မှောင်မိုက်၌တစ်ဦးသဘောသဘာဝအလငျး၌အချိန်ကြာမြင့်စွာနှင့်ပစ္စုပ္ပန်ကို Aqua နှင့်အဖြူရောင်အလင်းကိုသိုလှောင်ထားနိုင်မချည်ပေမယ့်ပစ္စုပ္ပန်ကယ်လီဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါပစ္စည်းအလုံအလောက်အလင်းစုပ်ယူပြီးနောက်အနည်းဆုံး6နာရီကြာမှောင်မိုက်၌တောက်နိုင်ပါတယ်။ ဒီအချည်အများအပြားနယ်ပယ်များတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်ဖက်ရှင်အဝတ်, ကလေးတွေ '' အဝတ်အစားဆက်စပ်ပစ္စည်း, ပွော, မိုဘိုင်းအိတ်, မိုဘိုင်းများအတွက် string ကိုအဓိက, ဆံပင်တီးဝိုင်း, လက်ကိုင်အိတ်, ဖိုင်အိတ်များအတွက်ညှို့, ပြင်ပပစ္စည်း, ပါတီ, ဘားပိုင်ဆိုင်မှုများအတွက်ညှို့, အလင်းထဲမှာသိမ်းထားတဲ့ တရုတ်ထုံး, မျက်စိကန်း, ငါးဖမ်းချည်များအတွက် string ကိုဆွဲ, ထိုသို့တောင်တက် wear, နှင်းလျှောစီး wear, towrope, bluejacket တူးစင်, ကယ်ဆယ်ရေးလူတွေနှင့်ရဲအဝတ်အစားများကဲ့သို့အချို့သောလုံခြုံရေးအဝတ်အစားမှာလည်းအသုံးပြုပါတယ်။
Braided နွမ်းချည်မြင့်သောဇွဲဝိုင်ယာကြိုးသို့မဟုတ်နိုင်လွန်ဝိုင်ယာကြိုးချည်ရှစ်သို့မဟုတ်တဆယ်ခြောက် strands အားဖြင့်လိမ်, ပြီးတော့နွမ်းဖြစ်ပါတယ်။ လိုအပ်သောအဖြစ်ဖယောင်းမိုးသည်းထန်စွာသို့မဟုတ်အလင်း, ကြမ်းတမ်းသို့မဟုတ်ပျော့စေနိုင်ပါတယ်။ ထူးမြတ်သောအရောင်အချောဆီကိုချောမွေ့ခြင်းနှင့်ဒုက္ခအခမဲ့အပ်ချုပ်အဖြစ်ကောင်းသောတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိသေချာ။ ဒါဟာဖိနပ်, ဆိုဖာနှင့်ပရိဘောဂများအတွက်စံပြဖြစ်ပါတယ်။
လဲမှို့ထုပ်သိမ်းရန် Poly Core အပ်ချုပ် Thread ရောင်းချ
Poly core ကိုအပ်ချုပ်ချည်ပတ်ရစ်ချည်သဘာဝဝါဂွမ်းထုပ်ပိုးပြီးအတူ polyester ဝိုင်ယာကြိုးချည် core ကို၏ဇွဲနှငျ့ခှနျအားပေါင်းစပ်တဲ့ထိပ်တန်းအရည်အသွေး core ကိုပတ်ချာလည်ချည်ဖြစ်ပါတယ်။ ရှည်လျားသောအဓိကထုပ်ပိုးပြီးအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အပ်ချုပ်စွမ်းဆောင်ရည်သေချာနှင့်ဆေးထိုးအပ်အပူထဲကနေအဓိကကာကွယ်ပေးသည်နေစဉ် polyester ဝိုင်ယာကြိုး core ကို, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ခွန်အားနှင့်ကြာရှည်ခံမှုပေးထားပါတယ်။ ဒါဟာဒဏ်ငွေဝါဂွမ်း, မိုးပြာရောင်ရှပ်အင်္ကျီနှင့်ဝတ်စုံ, ဒဏ်ငွေပိတ်ထည်နှင့်ပရီမီယံအတွင်းခံ, သားရေကုန်ပစ္စည်းများ, လက်သုတ်ပုဝါများနှင့်နေအိမ်ပရိဘောဂ, ဂန္ဂျင်းဘောင်းဘီနှင့်ပြင်ပ wear များအတွက်သက်ဆိုင်ပါတယ်။
မဲနယ်ဆိုး Poly ဝါဂွမ်း: မဲနယ်ဆိုးဆေးလုံးဝအပ်ချုပ်ချည်ဖို့ diffuse မထားဘူး။ စက်မှုဇုန်လက်ဆေးပြီးနောက်မဲနယ်ဆိုးသောအပ်ချုပ်ချည်၏အရောင်ကွာလျော့ကျကုန်သည်။ ဒါဟာမျှော်လင့်ထားသည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်ဒီအထူးဆိုးဆေးကိုအသုံးပြုသည်အဘယ်ကြောင့်အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်။ လက်ဆေးအမျိုးအစားပေါ် မူတည်. မဲနယ်ဆိုးသောအပ်ချုပ်ချည်ကွဲပြားခြားနားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိပါတယ်။ အဆိုပါ spec 602, 603, 452, 402, 403, 292, 293, 302, 303, 162, 163, 152, 153, 123, 202, 203, 204 ရရှိနိုင်ပါသည်။
1 - 10 Total 26 (3 pages)
သိကောင်းစရာများ:သင်တို့အဘို့အရှာနေတာမတှေ့ခဲ့သလား တိုင် တောင်းဆိုချက်များဝယ်ယူ
ဤသည်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးရဲ့သတင်းအချက်အလက် Globaltextile.com နေဖြင့်စစ်မှန်ကြောင်းသက်သေနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေသို့မဟုတ်မည်သည့်တတိယ party.Please မသိမသာကချမှတ်
ဤစာမျက်နှာပေါ်ရှိအင်္ဂလိပ်ထက်အခြားဘာသာစကား ကိုအားလုံးထုတ်ကုန်များနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသတင်းအချက်အလက် Translate Google ထံမှဘာသာပြန်ထားသောဖြစ်ပါတယ်။ Globaltextiles.com နှင့်၎င်း၏ affiliates, ဆောင်ရွက်ရန်အမြန်သို့မဟုတ် ဆက်စပ်. အများနှင့်မဆိုအရှုံး, အလိုအလျှောက်ဘာသာပြန်ချက်သို့မဟုတ်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာဘာသာပြန်ချက်အမှားများကိုများအတွက်ထိုက်မဟုတ်ကြဘူး။
ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း| ဆုပေးပွဲ| ကြှနျုပျတို့ကိုမှ Link ကို| ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ| တရုတ်ဝက်ဘ်ဆိုက်| မိတ်ဖက်| ဆိုက်ကိုမြေပုံ| Copyright (c) 2000-2020 GlobalTextiles.Com Corporation